Hoolka cagaaran ee SLC
Su'aal Hoolka cagaaran ee SLC
Year maalmood 1 6 ago #1109 by AppleJuice
Waxaan rajeynayaa in qof uu awoodi doono inuu iga caawiyo arrintan. Waxaan helay xadiiqadaha cagaaran ee cagaarka magaalada. Tani waa madaarka aan ku duulo oo aan dibadda u soo baxo, waxaanay runtii rabtay inay soo bandhigto muuqaalka qurux badan. Anigu ma arki karo in faylka la soo dejiyo, inkastoo ay ii soo dirayso goobta domain. Haddii qof kasto uu leeyahay wax iidhehyadayda ku saabsan meesha aan awoodi karo inaan soo dejiyo ama haddii aanan soo dejisan karin dhammaanteed, waxa ay noqon laheyd mid la qadariyo.
Thanks ka hor,
maalin 1 sano ka hor 1 #1116 by DRCW
Hello Isticmaal muraayadda download waxaadna heli doontaa goobaha!
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: AppleJuice
maalin 1 sano ka hor 1 #1117 by digaaga
Haddii aysan taasi shaqeyn tan isku day